Baarlamanka | Vaikuttajan reittikartta
Baarlamaanka Finland, halka dadyowga Finland wakiilka ay ugu yihiin 200 Xubnood ee Baarlamaanka, waa jirka ugu muhiimsan ee wadanka. Xubnaha Baarlamaanka awoodaas waxaa loogu doortey ayada oo loo soo maro doorashooyin kuwaas oo dhaxeysa afar-afar sanadood.
Waajibaadyada ugu muhiimsan ee Baarlamaanka waa in ay gudbiyaan sharciyo ayna maareeyaan miisaaniyada Wadanka. Taa waxaa raacsan, mas’uuliyadda Baarlamaanka waxaa ka mid ah:
daba galka howlaha xubanaha iyo maamulka hoos yimaada dowlada
ansaxinta heshiisyada caalamiga iyo diyaarinta ka qeyb qaadashada arrimaha la soo hordhigayo oo ay Midowga Yurub go’aaminayaan.
magacowida ra’iisul wasaare
Qof kasta ayaa Xubin Baarlamaan la xiriiri kara, ama Xubnaha Baarlamaanka (MP) waa sida loo yaqano ayaga, oo email, telfoon ama boosto ayaad kula xiriir kartaa. Ha ka cabsanin in aad ula xiriirto. Wax isbadel ma sameyneyso haddaad qof da’da codeynta gaarey tahay iyo in kale, Xubnaha Baarlamaanka (MPs) muwaadin kasta ayay muhiim ka yihiin. Xubnaha Baarlamaanka (MPs) way garowsan yihiin in shaqsiga da’da yar ee ayaga la xiriiraya yahay codbixiyaha mustaqbalka.
Faahfaahinta aad kula xiriireyso Xubnaha Baarlamaanka (MPs) iyo kalkaaliyahooda waxaad ka heli kartaa bogga Internetka ee Baarlamaanka Finnish (Suomen Eduskunta). Boggan internetka wuxuu sidoo kale leeyahay (links) aad ka heli karto (MPs) boggooda internetka, halkaas oo aad ka aqrin karto aaraarooda iyo fekradahooda. Sidoo kale macluumaad dheeraad ah waxaad ka heli kartaa bogga internetka Dhalin yarta Baarlamaanka (Nuorten eduskunta) oo ah.